Soritroritan’i Prof. Fatoumata Harber, Psikology Sady Bilaogera Ny Fiainana Andavanandron’ny Mpitolona Iray Ao Tombouctou · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2016 3:43 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Deutsch, English, Español, Français
Fiarabe iray nirehitra taorian'ny asa fampihorohoroana tany amin'ny faritra avaratr'i Mali. Sary nahazoana alàlana tamin'i F. Harber.
Nibahana ny pejy voalohany tamin'ireo famoahambaovao mahazatra ny fanafihana namely ireo firenena tandrefana. Fa nisy ihany koa ireo fanafihana hafa namely ireo firenena tsy dia mpanankarena loatra, nefa zara raha misy fandrakofana ny vaovao momba azy ireny, toy ny hoe tsy mandona fo loatra ny aina iray afoy any Sahel na Iràka raha oharina amin'ny any an-kafa. Kanefa, mitovy ihany ny fahatsapana ny tahotra sy ny fisaonana any amin'ireo firenena eo ambany fandrahonan'ireo mahery fihetsika. Toy izany no manjo ireo mponina izay miaina ao afovoany sy any avaratr'i Mali.
i Prof Fatoumata Harber dia isan'ny ato anatin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices nanomboka ny 2014. Any avaratr'i Mali izy no monina, ao Tombouctou, tanàna iray niaina ny fibodoan'ireo ‘djihadiste’ nandritry ny volana maro. Nitafa taminy ny Global Voices izy mba hahalalàna tsara ny niainany sy ireo mpiray tanindrazana aminy ireo fanamby tsy maintsy atrehana mba hivoahana velona amin'ny loza mitataon'ny fifandonana. Mampita hafatra ny hery miabo miainga avy any amin'i Fatoumata Harber ary izy no mitantara amintsika ny Mali-ny:
Global Voices (GV): Fatoumata Harber, mba resaho fohy aminay ny momba anao:
Fatoumata Harber (FH): Fatoumata Harber no anarako, niofana ho psikology, mampianatra ny psikopedagojia aminà ivontoerana iray fanofanana ireo mpampianatra mampiasa fiteny roa ao Tombouctou, avaratr'i Mali. Mpikatroka ihany koa aho, bilaogera ary monina ao Tombouctou. Faty no anarana ahafantarana ahy amin'ny asa soratro.
GV: Ho an'iza no ifantohan'ny vehivavy iray mpikatroka ao Tombouctou
FH: Tsy ahitàna fitsaharana ny andavanandron'ny vehivavy iray mpikatroka any anatinà faritra iray miady amin'ny tsy fandriampahalemana. Ary io toedraharaha io mihitsy aza no nanosika ahy hikatroka mba ho an'ny zon'olombelona.
Ny hampahafantatra ny rehetra sy hampibaribary ho fanta-bahoaka ireo fanamparana fahefàna ataon'ireny vondrona mitam-piadiana ireny amin'ny vahoaka ao amin'ny faritra no asa tena ataoko indrindra. Tsy manana làlana mendrika ho antsoina amin'izany anarana izany ny ao avaratr'i Mali mba hampifandray azy amin'ny faritra sisa rehetra ao Mali. Toy ny tavy iray voatsentsina izahay miaraka amin'ireo jiolahy avy amin'ny vondrona mitam-piadiana milaza azy ho mpikatsaka fahaleovantena sy mpiaro vahoaka ireo. Rehefa mila zavatra ry zareo, ny mandroba ireo vohitra mitoka-monina lavitra no ataony. Tsy tafita ny fampahalalàna ny vaovao na dia any anatin'ny filazambaovao nasionaly aza, arakaraky ny hiresahana ireo fampahalalambaovao iraisampirenena.
Izahay sasany mpampiasa ny tambajotra sosialy no afaka mampahafantatra haingana ireny fihetsika miharo heloka bevava ireny, na dia zara fa misy, mba tsy hilazàna hoe tsy misy mihitsy, aza ny asa fanavotana.
Noho ny hetsika ataoko na noho ny fifamaliana am-bava nifanaovako tamin'ny solontenan'izy ireo teny anaty tambajotra sosialy, fantatro fa manaraka akaiky ahy ireo vondrona sasany mitam-piadiana, saingy tsy mahatsiaro ho tandindonin-doza kokoa aho miohatra amin'ireo mponina hafa ao Tombouctou. Resy lahatra aho fa misy lanjany ny asa ataoko. Tsy maintsy ampahafantarina ny zavamisy: ny ankamaroan'ny vahoaka any avaratr'i Mali dia tsy mifamatotra amin'ireny vondrona mitam-piadiana ireny, tsy mpitaky fahaleovantena, saingy tsy atao ho antony izany mba tsy hitorohana ny fetran'ny fanatanterahan'ny fanjakana ataony amin'ny fametrahana fotodrafitrasa fototra any avaratr'i Mali. Indraindray dia avy amin'ireo manampahefana ny fandrahonana.
Fatoumata Harber – sariny ao amin'ny twitter.
GV: Resaho anay ny fandraisana anjara entin'ny vehivavy ho fampandrosoana ny faritra
FH: Momba ny fandraisana anjara ataon'ny vehivavy ho fampandrosoana ny faritra misy ahy, namorona aho ny Foibe “Flag des Femmes“, rafitra iray vatsian'ny orinasa Amerikàna “Flag International LLT” vola miaraka amin'ny fandaharanasa iray manofana momba ny fahaiza-mitarika natao ho an'ireo vehivavy anaty fikambanam-behivavy izay navondronay ho anaty tambajotra iray lehibe ahitàna fikambanana maherin'ny 200.
Mitondra ny fanampianay ihany koa izahay ho an'ireo fikambanana ireo, amin'ny alàlan'ny fanohanana ireo vehivavy manana asa fidirambola, amin'ny fandraisana azy ireny hanomezana azy ny vola ilaina hihetsehana. Toy izany no nahafahan'ireo vehivavy 10 mpanao mofo nahazo fàtana lafaoro sy fitaovana vaovao mba hanohizany ny asa fanaovana mofo amin'ny fombandrazana ao Tombouctou. Manana efitrano iray ahafahana miditra aterineto ihany koa izahay – efa ezaka lehibe izany- mba hanofanana maimaimpoana ireo vehivavy sy ireo tanora amin'ny resaka solosaina. Nanomboka tamin'ny nisokafanay tamin'ny Janoary 2015 ka mandraka androany, efa anjatony ireo vehivavy nofaninay ary 15 ny tanora. Saingy indrisy, very mpanolo-tànana izahy noho ny fisian'ny tsy fandriampahalemana miverimberina isanandro.
GV: Mandray anjara anatin'ny fandaharanasa PAT-Mali sy #Mali100Mega ianao, aiza ho aiza ireo izao?
FH: Ny PAT-Mali dia fandaharanasan'ny USAID izay fanampiana tsy hay faritàna – raha ny hevitro- ho an'ny faritr'i Tombouctou, tamin'ny alàlan'ireo tetikasa isankarazany notontosain-dry zareo teto an-tanàna. Indrisy fa nikatona io tetikasa io nanomboka tamin'ny fiandohan'ny 2016.
Teraka avy amin'ny fahitàna ny zavamisy ny #Mali100Mega. Anjakan'ireo orinasa roa goavana misahana ny finday ao Mali ny sehatry ny aterineto. Nifamory ireo mpikatroka miasa amin'ny sehatry ny TIC mba hamorona ny fiarahamientana iray hitakiana ny fanovàna ny sanda ampiharina ao Mali, sy ho fampiakàrana ny hafainganan'ny koriana, izay ratsy tokoa. Araka izany dia nametraka antontan-taratasy izahay tany amin'ny AMRTP – masoivoho maliana miandraikitra ny fandrindràna ny fifandraisandavitra sy ny paositra-, tany amin'ny antenimieram-pirenena, tany amin'ny Ministera mpiahy, nampiarahana taminà fandalinana nampitahàna ireo sanda ampiharin'ireo orinasa ireo. Izany dia narahana ihany koa taminà fanentanana teny anaty fampahalalambaovao, indrindra fa tao amin'ny Twitter sy Facebook, fa koa tany amin'ny fahitalavitra ary ireo radio nasionaly sy iraisampirenena sasany. Hotohizanay ny fihetsehana any anaty tambajotra sosialy raha mbola tsy misy fiovàny io. Tsy rendrarendra ny TIC, manana zo ho amin'izany izahay Maliana, na ho an'ny soa ho anay, na ho an'ny fampandrosoana.
GV: Ao anaty faritra iray izay andalovan'ny vahoaka fahasahirànana maro samihafa, ahoana no ataonao mba ho hita foana eny anaty tambajotra sosialy?
FH: Ahoana aho no mahavitra miseho foana nefa ve ny fahafahana mahazo tolotra toy ny herinaratra sy ny aterineto aza efa olana mandrakariva ? Ny fitaovana atolotry ny fivoaran'ny teknolojia fotsiny no ampiasaiko hihoarana ny sàkana : manana “smartphones” 2 foana aho, matanjaka hialàko amin'ny loza mitataon'ny fahatapahana tapoka, noho ny tsy fisian'ny herinaratra na fahampian'ny fandrakofan'ny tambajotra. Ny fifandraisana amin'ny finday no ampiasaiko bebe kokoa, ka na dia ratsy aza izany, mba afaka aho aloha mandefa imailaka amin'ireo hafa mpikambana ao anatin'ny vondrom-piarahamonin'ny bilaogera ao Mali, izay misolo tena ahy mamoaka ny lahatsoratro ao anatin'ny bilaogiko.
Fahanako amin'ny alalan'ny fitaovana manokana mampiasa ny masoandro ireo fitaovako – telefaona finday, solosaina finday, vatoaratra. Manararaotra aho misaotra ny Tambajotran'ireo Olompirenena Mavitrika ao Mali “RECAM”, izay manohana ahy ara-bola mba tsy ho tapaka ny famandrihako aterineto na eo aza ny sanda lafo ampiharina ao Mali. Misanda13500 FCFA ny 2Go amin'ny finday ary vetivety dia lany ny tolotra 2G rehefa anaty fifandraisana tsy tapaka ianao.
GV: Ny teninao farany, indrindra ho an'ny tanora?
FH: Ny teniko ho an'ny tanora Afrikàna ve ? Mila tanora mirotsaka an-tsehatra i Afrika mba hahatontosana ny fanambin'ny fampandrosoana !